Họrọ si na 10 kacha mma Launchers gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Got nwere ngwaọrụ mkpanaaka ọhụụ? mgbe ahụ n'ezie ị na-anwale nwere "ihu ọhụrụ" na desktọọpụ nke otu, ọnọdụ nke ga - akpali gị ịnwa ịchọta ngwa pụrụ iche na ụlọ ahịa Google Play; na-enweghị ime ogologo ọchụchọ na-enweghị mkpụrụN'isiokwu a anyị ga-ekwupụta ndị elere anya kacha mma Launchers maka gam akporo.
Tupu ịmalite ikwu ihe ha bụ ewere dị ka ndị isi 10 Launchers maka android, Anyị ga-anwa ịkọwapụta ihe obere okwu a na-anọchi anya ya. Mbubata na-abụ okwu Anglo-Saxon nke pụtara "Launcher" na nke ahụ na-arụ ọrụ dị ka ngwa na-agbanwe (maka ụfọdụ, na-emeziwanye) interface nke desktọọpụ nke sistemụ arụmọrụ. N'ihi ọtụtụ Launchers dị iche iche dị iche iche dị taa, onye ọrụ kwesịrị ịnwale ịhọrọ nke dabara na uto ha (n'ihe gbasara ọdịdị) yana ọrụ ndị ejiri mepụta ya.
1 1. Mgbaji Mgbuka
2 2. Ihe mmeghe Apex
4 4. zzda egbe
5 5. Gaa Launcher Ọpụpụ
6 6. Solo malite
7 7. Osote Osote
8 8. igba egbe 7
9 9 Ezigbo ulo oru
10 Yandex Shell nke 10
1. Mgbaji Mgbuka
Nke mbụ, anyị ga-ekwupụta na Launcher a nwere ihe ọ ga-akwụ (dị ka ọtụtụ ndị anyị ga-ekwupụta n'okpuru), ikekwe nke a bụ obere mgbochi maka ndị na-anwa ịnwe enyo na desktọọpụ. android n'efu; Ihe kachasị dị mkpa (dịka onye nrụpụta ahụ) lekwasịrị anya na ịdị ngwa nke ịchọ faịlụ anyị, na-enwe ike ịhazi wijetị kachasị mkpa anyị na ala dị ka ogwe ngwaọrụ, ma hazie obere okporo na usoro ụfọdụ maka nhazi nke nke ọ bụla n'ime ndị a Akara ngosi.
2. Ihe mmeghe Apex
N'etiti atụmatụ niile nke Launcher a, ikekwe nke kachasị mkpa bụ n'ụzọ nke nkesa nke ọ bụla n'ime wijetị n'ihi nhazi nke nha nke ntanetị; onye ọrụ ga-enwe ike ịkọwa ma ọ bụrụ na ha chọrọ Wijetị ndị a na ogwe osisi ma ọ bụ, na-emezughị nke ahụ, na ogwe ndị kwụ ọtọ n'akụkụ otu ihuenyo.
Nova enweela aha zuru oke na mpaghara a, ndi biara inye uzo ozo di iche. The Nova Launcher na-enyere aka ịhazi desktọọpụ desktọọpụ, nhazi nke ụfọdụ wijetị, ike inyocha ngwa na windo dị iche (dị ka ozi email anyị Gmail), mgbanwe site na otu ihuenyo gaa na nke ọzọ nwere ụdị 3D, n'etiti ụfọdụ ndị ọzọ gbakwunyere.
4. zzda egbe
E wezụga ịbụ onye mbido, ndị mmepe kwuru na ọ bụ ọrụ ga-enweta site na Google Play; Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na onye ọrụ nwere ike ibudata ụdị ọ bụla nke template nke dabara na ihe masịrị ha na mkpa ha, enwere karịa 100.000 na sava ya na a ga-etinye ya n'ọrụ ozugbo a họọrọ ya, niile site na ọrụ HomePack Buzz.
5. Gaa Launcher Ọpụpụ
Gaa Launcher EX wee bụrụ ụdị mgbanwe nke nkwụnye ahụ anyị kpọtụrụ aha n'elu, ebe ọ bụ na nke a ị nwekwara ike ịhọrọ n'etiti 100.000 isiokwu dị iche iche ka e wee tinye ha ozugbo dịka ihuenyo ụlọ nke desktọọpụ android.
6. Solo malite
Akụkụ kachasị mkpa nke Launcher a bụ na ọkwa; onye ọrụ ahụ ga-ama nke ọ bụla n'ime ozi ịntanetị ahụ ruru igbe mbata ha, ma ọ bụ nke ozi sitere na netwọkụ mmekọrịta ha mana n'ụzọ mara mma karịa otụ.
7. Osote Osote
Ihe ndozi a ka ndị otu mmepe ahụ kwurula n’elu; ihe kachasị mkpa ya bụ akụkụ 3D dị ka akụkụ nke ihuenyo ụlọ; ihu nke ọ bụla bụ akụkụ nke atụmatụ atọ a nwere ike ịnwe ngwa dị iche iche egburu n'oge ahụ.
8. igba egbe 7
Maka ọtụtụ, Launcher a dabere na ihe nwere ike ịmasị na Windows Phone 8, ebe ọ bụ na e nwere nhazi nke gụnyere taịlị dịka ndị Microsoft chọrọ na sistemụ mkpanaka ya.
9 Ezigbo ulo oru
Maka ndị chọrọ ka ha nweta ngwa gam akporo ha ka hazie nke ọma, nke a ga - enyere ha aka ịhazi ha niile nke ọma, n'ihi aha dị iche iche ejiri kpọọ ha na Google play na nke Launcher jiri hazie ha. .
Yandex Shell nke 10
N'ebe a, Otú ọ dị, anyị nwere ike ịmasị ụdị 3D carousel, ebe onye ọ bụla na-eji ihu akwụkwọ kọntaktị nke ọ bụla bụ akụkụ nke ya ga-ahaziri ya, otu ihuenyo ụlọ, akụkọ banyere ihu igwe ma ọ bụ okporo ụzọ n'etiti ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
Maka ọtụtụ ndị mmadụ, ndị Launchers a na-abanye na 10 kachasị elu, mana enwere ike ịnwe otu ihe ijuanya ma ọ bụ ihe ọzọ ịmara, yabụ ọ bụrụ na ị maara ya, onye ọ bụla ga-enwe mmasị ịtụle ya.
Ozi ndị ọzọ - A gam akporo: otu esi ewepu ihe eji egwu Google Play
Ihe nbudata - Mgbasa ahihia, Na-eme ka ihe ntanye, Nova Launcher, Buzz nchapu, Gaa Launcher Ọpụpụ, Onye nchacha ọkụ, Ihe mbido ọzọ, nkwụnye 7, Ezi mmalite, Yandex Shell
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Nchịkọta nke 10 kacha mma Launchers maka gam akporo
Killzone: onyinyo ọdịda daa